I-02 / 02 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 2, 2020
Ngokombiko weNkantolo Yama-Akhawunti, i-Şanlıurfa Trambus Project Imelene Nomthetho
Umbiko Wokucwaningwa Kwamacala Ama-akhawunti Wonyaka we-2018 ungenye yezindlela eziyisisekelo zoMthetho Wokuthengwa Komphakathi wephrojekthi ye-trambus, engaveli ku-ajenda ka-Şanlıurfa. iveze ukuthi yephula imigomo yokungabi sobala, yokuncintisana, yokuphathwa ngokulinganayo, eyimfihlo, kanye nokusebenzisa izinsiza ngendlela efanele [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Turhan İyidere Examines İkizdere Highway Work
UCahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, obehlola i-Iyidere-Ikizdere Highway, uhlangane nabathengisi kanye nezakhamizi esifundeni sase-Ikizdere ngemuva komhlangano obesendaweni yokwakha umgwaqo maqondana nemisebenzi eqhubekayo. Ungqongqoshe owenze isitatimende sezintatheli lapha [Okuningi ...]
Izovulwa nini i-Rize Artvin Airport?
UTurhan, owenza izivivinyo ekwakhiweni kwesikhumulo sezindiza iRize-Artvin, uthe banethuba lokubona amaphrojekthi aqhubekayo kuleli dolobha ngokuvakasha kwabo phakathi nosuku. Ukunikeza imininingwane ngomsebenzi onguthelawayeka we-Iyidere-Ikizdere, eTurhan, [Okuningi ...]
Inkinobho icindezelwe iBursa Northern Peripheral Highway!
Ukulungiselela ukuguqulwa komgudu engxenyeni yephrojekthi ye-Istanbul-Bursa-İzmir Highway, okulethwa ku-ajenda ngummeli uNurhayat Altaca Kayışoğlu, ilungu leLungu lePhalamende le-CHP Bursa ePhalamende kanye ne-Bureau ePhalamende. [Okuningi ...]
I-İmamoğlu, iPendik Kaynarca Tuzla Metro Ukwakhiwa KweMetro Kusasa ePendik
I-Ekrem İmamoğlu iza esizeni sokwakhiwa kwePendik ukuze kuvulwe umugqa metro kaPendik Kaynarca Tuzla. Amagama amaningi abalulekile azoba emkhosini ntambama futhi ukwakhiwa kwesitimela kuzophela ngo-2022. Istanbul Metropolitan Municipality [Okuningi ...]
Umgibeli Wokuthwala weKadıköy Moda Tram Ukhuphukile
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan ukhuphule isibalo sezitimela eziseKadıköy Moda Tram Line. Ngesikhathi samahora amatasa sosuku, umgibeli ophethe umugqa, owasizwa izinqola ezi-3, ukhuphuke ngamaphesenti angama-30. Phakathi kweKadıköy Moda [Okuningi ...]
Ukushiswa komhlaba ku-Samsun Ordu Highway
Ngemuva kokuguguleka kwenhlabathi endaweni yaseTaşbaşı Mahallesi esemgwaqweni oLwandle Olumnyama, uMasipala wase Metropolitan waqala ukusebenza ukuvula umgwaqo ngokushesha okukhulu ngokwenza umzabalazo ophumelelayo kusuka ngemizuzu yokuqala yesigameko. Amaqembu, umhlaba kanye [Okuningi ...]
UPendik Kaynarca Tuzla Metro Line Stops
I-Pendik Kaynarca Tuzla metro line eyekwe iyabiwa kuwebhusayithi esemthethweni ye-Metro Istanbul ne-IMM. Ukunqunywa komugqa metro, okuzokwakhiwa ngokubambisana yi-Alsim Alarko neCengiz, kunqunywa. [Okuningi ...]
Namuhla Emlandweni: 2 February 1922 26 kuya ku-Ankara ngoDisemba
Namuhla emlandweni u-2 ngoFebhuwari 1922 26 USekela-Khomishani Wezentengiselwano wase-US uGillespie, obefika e-Ankara ngoDisemba, ubhalele uMnyango Wezentengiselwano eMelika ngombiko: [Okuningi ...]